Ogaden News Agency (ONA) – Ururka OYSU ee S.A. oo khudbad ka jeediyay masajid kuyala University of Johannesburg .
Ururka OYSU ee S.A. oo khudbad ka jeediyay masajid kuyala University of Johannesburg .
Jamacada Johannesburg University oo loo soo gabiyo UJ oo ah jamacadii qaybta libaax ka qaadatay la dagaalankii xukunkii midab-takoorka isla marahaantaana caan ku ah u ololaynta xuquuqda aadanaha (one of the world’s most famous university for human right advocacy) ayuu xogyaha OYSU-SA maalinimadii salaadda Jimcaha khudbad aad u qiimi badan ka jeediyay.
Xoghayaha ayaa hadalkiisa ku bilaabay sidan; “Walaalayaal waxaan aad ugu faraxsanahay inaan salaada kula tukado maanta oo ah maalin Ramadaan ardayda jaamacadda caanka ku noqotay u ololaynta xuquuqul insaanka saan idiinla wadaago warbixino murugo iyo tiiraanyo leh oon idiinkaga wado wadan iyo dad shacab ah oon aad loo aqoonin oo la yidhaahdo Ogadenya oo ku jira marxaladii 3xaad ee halgankooda ay ku doonayaan xoriyad.”
“ Dear brothers and sisters I am grateful to attend this imperative prayer with you- students of one of the world’s famous universities for human right advocacy on a very important occasion of the Ramadan to share a heart breaking story and information with you about a little known region of Ogaden and its people who are in the 3rd libration struggle for freedom.”
Wafdiga ka socday ururka OYSU oo uu hogaamin hayey mudane Huud Sheikh Badri oo ah Xogaha guud ee ururka OYSU ee S.A. ayaa dadkii meesha isugu yimid oo isugu jiray Madow Hindi Cadaan oo u badanaa ardayda wax ka dhigata jamacada UJ qaarna ay ahaayeen Doctors iyo Professors iyo macalimiinba ayaa aad iyo aad uga xumaaday dhibaatada ay warbixintu xambaarsanayd, iyagoy qaarkood ay ka muuqatay murugo iyo xamasad.
Xogahayuhu maruu ka hadlayay sababta kacdoon lamid ah kuwa ka socda Waqooyiga Afrika uga dhici la’yahay Ethiopia ayuu yidhi; dadkayagu xor uma aha xataa inay is xoreeyaan, mana haysano awood siyaasadeed oon ku muujisano waxaan doonayno – ( — we are not free to free ourselves, nor we have any sources for political power.)
Wuxuu intaa raaciyay in dadka Itobiya ku nool aanay xataa haysanin xoriyad ay halmeel isugu yimaadaan mana helaan adeega isgaadhsiineed ee casriga ah, isla-markaana looma ogola waxkasta oo u sahli kara awood siyaasadeed oy ku afganbiyaan xukunka guumaysiga.
Ururka OYSU ayaa rajayn haya inuu wax badan ka qaban doono sidii ay fagarayaasha iyo jamacadaha waaween ee South Africa u dhex geyn lahaayeen qadiyada Ogadenia.
Waxaa xusuusin mudan in jaamacaddan Johannesburg ay qayb weyn ka qaadatay in xidhiidhka loo jaro dowlada Israel ka dib markay ku tumatay xuquuqda dadka reer Falastiin.